लिम्वूवान - विविध सामग्री: तीज र आदिवासी महिलाहरु
दिल पालुङवा लिम्वु"नेपालकुश्शा"
तीजलाई हरितालिका पनि भनिन्छ । भदौतिर पर्ने यो चाड हिन्दू महिलाहरुको मौलिक चाड हो । यो चाड आदिवासी जनजातिहरुको होईन । यो चाडमा वाहुन क्षेत्री महिलाहरु माईत जाने गर्दछन् । अनि विषेश गरेर रातीको समयमा टन्न हुने गरी खान्छन् । यस वेला विषेश परिकार दर खाईन्छ । भोलिपल्ट केही नखाई वर्त वसिन्छ । त्यसवेला महिलाहरु जम्मा भएर तीज गीत गाउने र नाचगान गर्ने गर्दछन् । वल्लवल्ल असारे कामको चटारो सकिएर थकान पनि मेटन पाएकोमा उनीहरु अति प्रफूल्लित हुन्छन् ।
वाहुन क्षेत्रीको सामाजिक चालचलन पनि अन्य समुदायको भन्दा केही फरक छ । महिलाको स्थान यो समुदायमा अपहेलित पाईन्छ । परिवारमा विभेद हुन्छ । त्यसमा पनि महिलाहरु वढी विभेदमा पर्दछन् । महिलमा पनि वुहारीहरु वढि विभेदमा पर्दछन् । उनिहरु कहिल्यै पनि राम्रो खान पाउदैनन् । स्वतन्त्र काम गर्न पाउदैनन् । मेलावजार जान पाउदैनन् । जुठो पुरो उनीहरुले खानु पर्दछ ।खाना खादा जहिले पनि श्रीमानले श्रीमतीलाई खाएको थालमा सानो भातको डल्ला राखिदिन्छन् । त्यही जुठो थालमा भातखाने गर्दछन् । भात पनि अघाउँजी खान पाउदैनन् । भात पनि मिठो जति ससुरा सासु र छोराहरुले खान्छन् । वुहारीलाई नमिठो दिईन्छ । त्यस्तै राती सुत्ने वेलामा श्रीमानको खुट्टा मालिस गरिदिनु पर्दछ । खुट्टा धोएर पानी खानु पर्दछ । मन खिन्न भएता पनि आफ्नो चलन सम्झेर खुसी नै हुन्छन् । वुहारीको घरमा आंत खोलेर धित मरुञ्जेल वोल्न पाउदैनन् । अझ मेलावजार जाने त कुरै नगरौं । उनीहरु प्रेमविवाह गर्न सक्दैनन् । समाजले मान्दैन । तर आजकल यो वन्धन नव पुस्ताहरुले तोड्दैछन् । यसरी महिलाहरुको स्थिती भयावह छ । तव उनीहरु तीजमा माईत गएर मनाउदा अति खुसी हुन्छन् । वर्षा एक पटक मिठो मसिनो खान पाउछन् । तसर्थ टन्न हुन्छन् । तर यो चाडको पनि मौलिकता हराउदै गएकोमा उनीहरु चिन्तित छन् । अर्कोतिर यसको गीतहरुमा परिवर्तन व्यापक भएको छ । चालचलनमा पनि परिवर्तन हुदैछ ।
उनीहरुको अर्को चलन अनुसार रजस्वला अर्थात मीन्स भएको वेला घर परिवारवाट अलग्गै रहनु पर्दछ । उनीहरुले कसैलाई छुन पनि हुदैन । खानापानी छुन हुदैन । गाईलाई पनि छुन हुदैन । छुंदा अशुद्ध मानिन्छ । त्यसैले यो समयलाई नछुने भएको भन्ने चलन चलेको हो ।
वाहुन क्षेत्री महिलाहरुको जस्तो स्थिती आदिवासी जनजाति महिलाहरुमा पाईदैन । उनीहरुलाई कुनै विभेद हुदैन । श्रीमानको खुटटा धोएर पानीखानु पर्दैन । उनीहरु जे गर्न पनि स्वतन्त्र छन् । मेलावजार जहां जानपनि छुट छ । खाने कुरा अर्थात भान्सामा विभेद पाईदैन । मीन्स भएको वेलामा अरुलाई थाहा पनि हुदैन । त्यो वेला सदाझैं समानता नै हुन्छ ।
पहिले आदिवासी जनजातिका महिलाहरु तीजमा सहभागिता जनाउदैनथे । तर अचेल व्यापक मात्रामा सहभागिता जनाउदैछन् । तीजको दर भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन । तर उनीहरु रक्सीको चुस्कीको पार्टी
लिन्छन् । अचम्म हङकङमा पनि जनजाति महिला विषेश गरेर मगर गुरुङहरुले व्यापक तीज मनाए । मन लाग्नेले मनाउन पाउछ तर जनजातिको चाड तीज होईन । यो हिन्दुहरुको हो । वाहुन क्षेत्रीको हो । हामीलाई यस्तै चार्डपर्वहरुले पछि पारेको भन्दछन् । तर तिनै जनजाति अगुवाहरु नै आफ्नो कुरो विर्सेर मनाउदा कति हास्यस्पद देखिन्छ । जनजाति महासंघ पनि उस्तै आफै हिन्दू धर्म संस्कारले गर्दा पछि पारिएको वताउछन् । तर तीज मनाउछन् । त्यस्तैलाई वर्षचेली आदिले पनि सम्मान गरिन्छ । आफ्नो मौलिकता, पहिचान थाहा नहुनेहरुले के हिन्दुवादको विरोध गर्नु । के संस्था चलाई रहनु ।आफ्नो मौलिकतामा रमाउनेहरु माथि किन खेलवाड गर्ने । अर्थात हिन्दुहरु पनि नेपाली नै हुन् । उनीहरुको कारण भन्दा हामी आफ्नै कारणले पछि परेको भनेर स्वीकार्नु पर्यो । नत्र खुरुक्क नैतिकतकाको आधारमा राजिनामा दिएर स्वतन्त्र भएर वस्दा हुन्छ ।
वास्तवमा जनजाति महिलाहरुले कुरा चाही नवुझे कै हुन । त्यसमा पनि गुरुङ र मगर जातिहरु पहिले देखिनै सामान्यत आफ्नो मौलिक चाडमा आँच आएका जातिहरु भएकोले उनीहरु पहिले पनि तीज मनाउथे । यही क्रम जारी हुदा अहिले व्यापकता भएको हो । तर अहिले आफ्नो धर्म संस्कारको पहिचान भईसके पछि त्यतापट्टी लाग्नुपर्ने हो । त्यो चाही हुन सकेको छैन ।
वि.सं.१८३१ तिर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई असली हिन्दू राष्ट्र वनाउछु भनेर अभियान थालेका थिए । त्यसैले आफ्नै धर्म संस्कृति परम्परा हुने आदिवासी जनजातिहरुलाई दशैं मान्न लगाए । दशैं हाम्रो चाड होईन भनेर नमान्ने आठपहरिया र्राई रिदामा र राम्लीहाङ मारिएको थियो । पश्चिममा केही गुरुङ मगरहरुलाई पनि मारियो । वाहुन पण्डित सवै आदिवासीहरुलाई अनिवार्य चलाउन लगाए । सत्यनारायणको पुजा अनिवार्य जस्तो थियो । समय क्रममा यही हिन्दूवादीहरुले आफ्नो भाषामा त के उनीहरु कै खस पर्वते भाषामा पनि पढ्न दिएनन् । तसर्थ आदिवासीहरुको भाषा लोप भएर गयो । लोप हुन नसक्नेको विकास भएन । शिक्षाको ज्योति नपाए पछि मानिस स्वभावैले स्वांठे मुर्ख हुन्छ । आदिवासीहरुलाई पनि असभ्य भने । यसरी यीनीहरुले हेपे, नराम्रो वचनले वोलाए । सहनु पर्यो । यीनीहरु भर्खरै भारततिरवाट मुसलमानको आक्रमण खप्न नसकि नेपाल आएका थिए । विस्तारै षड्यन्त्र गर्दै आफ्नै अन्नदाता त्यहींको रैथाने आदिवासीहरुलाई आफ्नै भूमिमा कैद गर्न सफल भए ।
यसर्थ यस्तो दर्दनाक परिस्थितीवाट गुज्रेर आएको इतिहास भुलेर आज उनै दमनकारी संस्कारलाई मान्नु जनजाति महिलाहरुको तरिका के हो ? स्वतन्त्र हुँदाहुदै दासी वन्न किन चाहेको हो ? वरु आफ्नै संस्कार संस्कृतिमा रमाउन सिक्नु पर्दछ । फलाउनु फुलाउनु पर्छ । उनीहरुको संस्कारलाई सम्मान गर्दै जानु पर्दछ । विडम्वना चाही के भयो भने आफ्नो चाही ध्यान नदिने अरुको मात्रै ध्यान दिएर प्रमोट गर्ने वानी छोड्नु पर्दछ ।
साथै हङकङ सरकारवाट तीजको नाममा वजेट ल्याउने काम संघ संस्थाले गरेर धार्मिक व्देष रोप्नु राम्रो होईन । यसको विरोध भविष्यमा हुनेछ । यदी नेपालीको लागि वजेट ल्याउने हो भने जाति विषेशकोमा नल्याई सामुदाय विषेशमा ल्याउनु पर्दछ । यसकोलागि सम्वन्धित सवैले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । सेवारो ।